Nikatso Tamin’ny Andro Voalohany Handefasana Azy Ilay Tranonkala Vaovao Ho Fanaovana Fitakiana Ety Anaty Aterineto Tao Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2013 5:48 GMT
Nanokatra vohikala vaovao ny fitondrana Shinoa ho fandraisana ny fitakian'ny Shinoa rehetra ety anaty aterneto ny 01 Jolay 2013, ezaka izay natao haha-haingana ny dingana arahana ary narahana fanomezan-toky manao hoe “ny tranga rehetra atao amin'ny alalan'io tolotra vaovao io dia hahazo valiny avokoa,” araky ny nambaran'ny Xinhua Nouvelles [zh].
Kanefa dia nikatso ilay vohikala vaovao ny maraina voalohany nisokafany noho ny habetsaky ny mpiserasera. Na dia niverina nandeha indray aza ilay vohikala ny tolakandro dia mbola nisy olana maro hafa. Ohatra iray izao, tsy mahazaka Internet Explorer ilay izy.
Fomban-drazan-dry zareo Shinoa ny mandeha manatona mivantana ny Amperora any Beijing hitondra ny fitarainany raha toa ka tsy raharahian'ny governemanta ao an-toerana ny fitakian'izy ireo. Kanefa ankehitriny, na mbola azo atao aza izany fitarainana dia tena tsy tsara amporisihana mihitsy. Matetika no mitady ny rariny amin'ny alalan'ny rafitra ara-dalàna na ireo birao eo an-toerana ny mpanao fitarainana. Na dia izany aza, manatona any amin'ny birao Nasionaly any Beijing ihany ireo izay tsy afa-po tamin'izay heverina ho tsy nahazo rariny. Vao tsy ela izay, nirona tany amin'ilay White House Petition Website (Vohikalan'ny Trano Fotsy atao Ho Fitarainna) ny vahoaka hitady fanampiana.
Nametrahana fanontaniana maro mikasika ny fahamatorany amin'ny fiatrehana io tetikasa vaovao io ny governemanta noho ilay fikatsoana. Tao amin'ny Sina Weibo, ilay vohikala malaza indrindra fitorahana bilaogy kiritika, ny fikarohana ny hoe “fitakiana tanaty vohikala ” dia ahitàna serasera mihoatran'ny 525.364 [zh] ny 02 Jolay 2013. Maro tamin'ireo mpampiasa aterneto no niahiahy be ihany ny amin'ny hahatanteraka io rafitra fitakiana anaty aterneto io, ary misy mihitsy ireo matahotra fa mety hampiasain'ny governemanta ho amin'ny fanaraha-maso ireo mpitaraina io vohikala io.
Sarin'ilay vohikala fitarainana
Ilay gazety “Yunxin Shiping” ao Yunnan dia namoaka ampahana fanehoan-kevitra mitondra ny lohateny hoe “Inona no dikan'ny Aretin'Ilay Tranonkala fanaovana fitakiana” :
Satria be loatra ny fitarainana tsy raharahian'ny sampan-draharaham-panjakana sy ny sampan-draharahan'ny fitsarana, izany no mahatonga ny vahoaka tsy mahatoky ny lalàna fa ny fitakiana, tsy maintsy ampakarina amin'ny sehatra avo avokoa ny zava-drehetra. Fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe tsy mora ny làlana mankany amin'ny fitakiana, mihoatra lavitra noho ny lojika ny fikatsoan'ilay vohikala taorian'ny fisokafany, kanefa efa nampoizin'ny maro ihany. Aorian'ireny fanapotsirana ny “souris” ireny, firy ny zo voahosihosy, firy ireo tomponandraikitra mody fanina sy miavona, ary firy ireo fikambanana ao an-toerana no tsy nanao inon'inona na nanao zavatra tsy araka nytokony ho izy…… Tsy sarotra ny alaina sary an-tsaina izany.
“Qingwa Mading” dia nitaraina [zh] momba ilay rafitra fitakiana amin'ny ankapobeny sy ny tsy fandehanan'ilay vohikala tsara. Nolazainy ihany koa fa mamatsy torohay mora foana ho an'ny governemanta ny olona manoratra ny tena anarany ao, izay hanamora ny fanakànany azy ireo tsy hanao fitakiana intsony :
Ao anaty firenena iray izay ny fanangona-tsonia fanaovana fitakiana no ianteheran'ny olona hikatsahany ny rariny, mampihomehy be ny hiresahana demokrasia sy fahalalahana, satria raha any amin'ny firenena manara-dalàna, dia voavahan'ny lalàna avokoa ny tsy rariny ara-tsosialy rehetra. Natsangana ny Birao Fitakiana Anaty vohikala ao Shina, kanefa tsy mahazaka Chrome akory, toy ny hoe lasa any am-paosin'ny fianakavian'ny mpitondra sasantsasany ny vola tokony hampiasaina tamin'ny fananganana ilay vohikala. Mila fanamarinana amin'ny nomerao karapanondro ny fisoratana anarana, izay hanampy hanamorana ny asan'ny manampahefàna eo an-toerana mihevitra ny hanakana ireo mpanao fitakiana.
Ilay bilaogera “Laoshu Jiazi Beiyong” dia nanazava[zh] ny antony nilazany fa tsy hanjary io fitakiana anaty aterneto io :
Raha tsy hijery afa-tsy ireo mpanao fitakiana teo aloha, dia hitantsika ao fa avy any amin'ny toerana lavitra andriana tsy dia ahitàna aterineto avokoa ny ankamaroan'ny mpanao fitakiana, mety tsy handeha mihitsy noho izany ny filazana amin'izy ireo ny tokony hampiasàny ny aterineto ho fitaovana hanaovany fitakiana. Amin'ny lafiny iray, maro amin'ireo mpanao fitakiana no tsy mahatoky ny fitsarana fa aleony fitakiana, tsy mahatoky ny birao fametrahana fitakiana ao an-toerana izy ireo fa aleony ny birao nasionaly satria fantany fa manana hirika kokoa izy ireo raha mankany Beijing hitaky ny rariny. Na dia izany aza anefa, maro amin'ireo mpanao fitakiana no tratran'ny fanilihana andraikitra (pass the buck) na ny “fandraisana mangatsiatsiaka”. Ary na dia manao fitakiana anaty aterineto aza izy ireo, dia tsy afaka misoroka ireo olana voalaza ireo ihany. Tokony hanova paika indray ny governemanta ao an-toerana izay zatra “mandrara”, “manafina”, ary “manery” mba hifandraisana amin'ireo mpanao fitakiana “Amin'ny fanakànana ny olona tsy ho any Beijing” ka hatramin'ny famafàna ny atao hoe “fampahafantarana ratsy.
Ilay mpanao famakafakana Wang Chuanyan dia nampitandrina [zh] ny mety hisian'ny fanaraha-maso anaty aterineto ataon'ny governemanta :
Mbola olana ny fiarovana ireo mpanao fitakiana anaty aterineto. Voalohany, ny fitandroana fahazoana antoka ireo dingana ao anaty aterineto, moa misy ve ny rafitra fanaraha-maso apetraky ny governemanta eo an-toerana? Efa voaara-maso ve ny fampahafantarana avyamin'izy ireo? Efa voasivana sahady ve ny torohay ety anaty aterneto?
Ilay mpanoratra Jin Maolou dia namintina toy izao [zh] :
Eto amin'ny firenentsika, miafara amin'ny herisetra ny fampiharana ny lalàna, halatra ny haba, ampiasaina fotsiny ny fitakiana mba hialàna bala tsy handraisana andraikitra. Anio, namoaka fanambarana ilay birao fa ekeny ny fanaovana fitakiana anaty aterineto ary nanome toky fa “ny tranga rehetra atao amin'ny alalan'io tolotra vaovao io dia hahazo valiny avokoa.” Na dia izany aza, nikatso ilay vohikala ny tolakandro. Ny marina, Inona no tena itiavan'ny olona ilay vohikala ? Ilay biraom-pitakiana izy tenany aza biby mampitahotra, tsy ilaina ny mametraka fitokisana aminy. Iray ihany ny làlana, rafitra lalàna iray mahaleotena tanteraka. Raha tsy vahana ifotony ny olana, inona no ilàna io fampisehoana io ?